War (2019) | MM Movie Store
ကားသဈတှေ ကားကောငျးတှေ ဆကျတိုကျထှကျနတေဲ့ကွားက ယနထှေ့ကျ ဘောလိဝုဒျကားသဈကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။နာမညျကွီး မငျးသားနှဈယောကျ အားပွိုငျထားတဲ့ ဒီဇာတျကားကွီးဟာဆိုရငျ…. ဘတျဂကျြငှရေဲ့ ၃ဆကြျောကြျော အောငျပှဲခံခဲ့ပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးလေး ခရြငျလညျး မဖတျဘဲ ဒေါငျးကွမှာမို့ သိပျပွီး မရေးတော့ပါဘူး။တိုကျဂါးနဲ့ ရီသိတျဟာ တပျမတျောသားတှဖွေဈပွီး တိုကျဂါးကတော့ ရီသိတျရဲ့ တပညျ့အဖွဈ မွငျရပါမယျ။ရီသိတျဟာ လတျတလောမှာ မဈရှငျတဈခုကို လုပျရငျး တရားခံကို မပဈဘဲ ကိုယျ့ဖကျက အရာရှိကို ပဈသတျသှားခဲ့တယျ။
သူ ဘာကွောငျ့ ပဈခဲ့တာလဲ….ဘာကွောငျ့ သစ်စာဖောကျသှားခဲ့တာလဲ…သူ့လို တညျကွညျဖွောငျ့မတျပွီး သစ်စာရှိတဲ့ လူတဈယောကျ သစ်စာဖောကျသှားတာကို စုံစမျးဖို့နဲ့ ရှငျးပဈဖို့ တာဝနျပေးခံရသူကတော့… တိုကျဂါးပါ။
ကဲ…. ဆရာနဲ့ တပညျ့…. ရနျသူနဲ့ တပျမတျောဘကျတျောသား…. ဘယျလို ဆကျဖွဈကွမလဲ…..အမှနျတရားကို ဘယျလို ဖျောထုတျကွမလဲ…. ဆိုတာကို ကိုယျတိုငျသာ ခံစားကွညျ့ကွပါဦးဗြာ။
ကားသစ်တွေ ကားကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ထွက်နေတဲ့ကြားက ယနေ့ထွက် ဘောလိဝုဒ်ကားသစ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။နာမည်ကြီး မင်းသားနှစ်ယောက် အားပြိုင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကြီးဟာဆိုရင်…. ဘတ်ဂျက်ငွေရဲ့ ၃ဆကျော်ကျော် အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး ချရင်လည်း မဖတ်ဘဲ ဒေါင်းကြမှာမို့ သိပ်ပြီး မရေးတော့ပါဘူး။တိုက်ဂါးနဲ့ ရီသိတ်ဟာ တပ်မတော်သားတွေဖြစ်ပြီး တိုက်ဂါးကတော့ ရီသိတ်ရဲ့ တပည့်အဖြစ် မြင်ရပါမယ်။ရီသိတ်ဟာ လတ်တလောမှာ မစ်ရှင်တစ်ခုကို လုပ်ရင်း တရားခံကို မပစ်ဘဲ ကိုယ့်ဖက်က အရာရှိကို ပစ်သတ်သွားခဲ့တယ်။
သူ ဘာကြောင့် ပစ်ခဲ့တာလဲ….ဘာကြောင့် သစ္စာဖောက်သွားခဲ့တာလဲ…သူ့လို တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ပြီး သစ္စာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် သစ္စာဖောက်သွားတာကို စုံစမ်းဖို့နဲ့ ရှင်းပစ်ဖို့ တာဝန်ပေးခံရသူကတော့… တိုက်ဂါးပါ။
ကဲ…. ဆရာနဲ့ တပည့်…. ရန်သူနဲ့ တပ်မတော်ဘက်တော်သား…. ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ…..အမှန်တရားကို ဘယ်လို ဖော်ထုတ်ကြမလဲ…. ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်သာ ခံစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ။